Barroosinka barroosinka, Stud Bolt, U-Bolt - Tailian Fastener
Kusoo dhawow Tailian
Iyada oo ah qiimaha horseedka deyrka banaanka ee caalamiga ah, waxaan bixinnaa alaabada ugu fiican.
Hebei Tailian Fastener Manufacturing Co., Ltd. waxay ku taalaa Degmada Yongnian, Handan City, xarunta ugu weyn ee wax soo saarka qeybaha Shiinaha.
Waxyaabaha laga soo gudbay heerka in ka badan 90%
in kabadan 300 maareeyayaal
awoodda wax soo saarka naqshadeynta sanadlaha ah ee 50000 tan
Warshadeenu waxay ku takhasustay soo saarida: barkin barroosinka, boolida isteerinka, U-bool, U-hoop, birta birta, birta birta, ciddiyaha alxanka alxanka, kulul-faleebo galvanized bolt, birta munaaraddii birta, fur fur, dhex-derbiga bolt, steel gundhig saxan, boolida macdanta, taxanaha lowska, qaybo qaabab gaar ah leh, iwm.
waxaan ka qaadanaa alaabta ceeriin tayo sare leh makiinadaha birta waaweyn ee warshadaha wax soo saarka birta waaweyn iyo gobolada, waxaanuna hubinaa tayada qalabka iyadoo si adag loo xakameynayo tayada. Shirkaddu waxay ka gudubtay shahaadada maaraynta nidaamka tayada leh ee ISO9001.